UKUBONISWA KWENDLELA EDIBENEYO YOKUKHANGELA (ISIKHOKELO SOYILO) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Ukuboniswa kweNdlela eDibeneyo yokuKhangela (Isikhokelo soYilo)
Ukuboniswa kweNdlela eDibeneyo yokuKhangela (Isikhokelo soYilo)
Nasi isikhokelo sendlela yokuhamba komgaqo obanzi ocacileyo kubandakanya ukuba yintoni, uyilo, iindleko, ukutywina kunye nokulungisa kunye nendlela ethelekiswa ngokuthe rhoqo. Ukuvezwa kweendlela ezihlanganisiweyo kudala zaziwa ngokuzinza kwazo kunye nomtsalane, imbonakalo yendalo. Ngoku ezi iintlobo zeendlela zokuqhuba Ukufumana ingqalelo ngakumbi kubalulekile ukugubungela iziseko zeendlela ezihlanganisiweyo zokuhamba.
Yintoni iNdlela yokuBoniswa kweNdlela eDibeneyo?
Iindleko zeNdlela yokuHlola
Isimboli seNdlela yokuDibanisa
Ukulungiswa kweDrayivu yokuHlanganisa
Ukubonakaliswa kweAggregate vs Concrete Drayway
Umdibaniso ligama lokwakha elibhekisa kwizinto ezikhululekileyo zecandelo. Izinto eziphathekayo zinokuba ngamatye, iingqalutye, uthuli lwamatye, okanye iigobolondo ezichotshoziweyo.
indlela yokuphithizela imiyalelo yelokhwe yomtshato
Umdibaniso lilungu eliphambili lekhonkrithi, elichaphazela ukomelela kwalo, ukuthungwa nokubonakala kwalo. Xa kugalelwa indlela yendabuko yekhonkrithi, iziphumo umphezulu ogudileyo.
Ukufezekisa ukubonakala okuhlanganisiweyo okubonakalayo, olo luhlu luphezulu luyahluthwa kusetyenziswa iikhemikhali okanye ukuhlanjwa kwamanzi, kutyhila umyinge ongezantsi. Inkangeleko eyahlukileyo iya kufezekiswa kuxhomekeke kwinto esetyenzisiweyo ngokudibeneyo.
Ukubonisa ukuhlanganiswa okubandakanya ukuxinwa okunzima kwentlabathi kuya kubonisa ukuthungwa kwe-sandpaper, kunye nemibala eqala ukukhanya okwesibhakabhaka ukuya kumbala wegolide.
Umxube wamatye amnyama namhlophe wenza uyilo olugqibeleleyo lokugqiba umbala. Ubumhlophe obumhlophe beqokobhe elithandwayo zizinto ezidumileyo kumdibaniso woluntu.
Umdibaniso obonakalisiweyo, njengekhonkrithi, uqina ngokuqina okumangalisayo kunye namandla oxinzelelo. Iinqwelo-mafutha ezinkulu zinokuqhutywa kwiidriveways ezihlanganisiweyo ngaphandle komngcipheko wokuqhekeka okanye wokutshona.
Ngaphandle kokudityaniswa kwamalungu avumela ukuba izinto zikhule kwaye zingene kwisivumelwano kunye nokuqhekeka okuncinci, ukubonwa okuhlanganisiweyo kubekwe njengesilayidi. Ambalwa amalunga akhokelela kwindawo yokuhamba ngakumbi, ukunciphisa umngcipheko wokuhamba kunye nokuwa.
Ngelixa iindlela zegrabile ingabekwa yi-DIYer ezimiselweyo, iidrivethi ezihlanganisiweyo zilungele ukushiya iingcali. Ukufakwa kobuchwephesha akuyi kuqinisekisa kuphela ngemveliso enomtsalane kunye neyomeleleyo egqityiweyo, iziphumo ziya kuhlala iminyaka ezayo.
Ukufakwa ngendlela eyiyo kweendlela ezihlanganisiweyo kunokulindeleka ukuba kunyamezele ngaphezulu kweminyaka engama-30.
Iindlela ezimbini zokuhamba kweemoto ziimitha ezingama-24 ububanzi kunye neenyawo ezingama-20 ubude, okanye iinyawo ezingama-480. Ukubala iindleko zomgaqo weendlela ezihlanganisiweyo, kufuneka ubandakanye ixabiso lezinto zokusebenza kunye nomsebenzi wokuzifaka.
Iindleko zezixhobo ziyahluka ngokubanzi. Lindela ukuhlawula ubuncinci i-600 yeedola ngekhonkrithi kunye nezinto ezihlanganisiweyo. Ukuba izinto zokuphela eziphezulu ezinje nge-quartz zibandakanyiwe kumxube wokudibanisa, unokuchitha imali eyi- $ 1,300 ukuthenga izinto zakho.
Iindleko zokufaka ziyahluka ngokuxhomekeka kwiindleko zabasebenzi kwindawo okuyo. Lindela ukuba ucatshulwe phakathi kwe- $ 700 kunye ne- $ 1,100 kuyo yonke imisebenzi enxulumene nokuguqula umndilili weemoto ezimbini, okanye phakathi kwe- $ 3 kunye ne- $ 5 ngonyawo wesikwere.
Iipropathi zetywina olikhethileyo ziya kuchaphazela ukubonakala kunye nokusetyenziswa kwendlela yakho yokuqhuba kwiminyaka ezayo. Khetha itywina elibandakanya ukhuselo lwe-UV kwaye alunamthubi. Kuya kufuneka igxothe amanzi, igrisi, kunye neoyile, kwaye inganyangeki kumabala. Isitywina esinembonakalo emanzi ecwebezelayo sinokuveza imibala eqaqambileyo okanye enzulu kumdibaniso.
Umdibaniso obonakalisiweyo kufuneka unyangeke ngokupheleleyo kwaye ungenalo uthuli ngaphambi kokufakwa okokuqala kwetywina. Hlamba wonke umphezulu womgaqo kwaye uvumele ukuba wome.
isipho seshawa somtshato sodade
Khetha usuku olunomoya omncinci ukunciphisa inani lothuli oluvuthela kwi-sealant yakho, njengoko oku kunokuchaphazela ukubonakala kokugqibela.
Amanye amatywina kufuneka akhululwe okanye asuswe ngaphambi kokuba kufakwe idyasi entsha. Umphezulu ongalinganiyo wokudityaniswa kwamanqaku wenza oku kubenzima, ukuba akunakwenzeka, ngoko zigcinele intloko ngokukhetha imveliso enokuthengiseka.
Ngelixa paver ukuqhuba Ukufuna ukubekwa kweliso rhoqo kunye nokutshintshwa njengoko kuvela ngokungenakuphepheka, ukuvezwa kweendlela ezihlanganisiweyo zifuna ukulungiswa okuncinci.
Yonke ikhonkrithi iya kuthi ekugqibeleni iqhekeke. Ukudityaniswa kwamalungu zizikhewu kwikhonkrithi ezikhuthaza ukuba ziqhekeze kwimigca ethile. Oku kuyivumela ukuba ihambe kwaye itshintshe notshintsho kubushushu kunye nokufuma ngaphandle kokuphelelwa ngamandla.
Thetha kwisifaki sakho malunga nokuba ungalindela phi ukuqhekeka. Ukuba ezinye iintanda zivela kumdibaniso wakho ocacileyo, ukuzikhathalela ngokukhawuleza kuya kwandisa ubomi bendlela yakho.
Ikhonkrithi ihlala ifuna ukuphinda ithengiswe rhoqo emva kweminyaka embalwa ukukhusela ubume bayo obugudileyo kunye nangaphezulu. Kwiindlela eziveziweyo zokuhamba ngokubanzi, olu luhlu luphezulu lwahluthwa ngaphambi kokuba kufakwe idyasi yokuqala yesitywina.
Abafaki abohlukeneyo baya kuncoma iishedyuli ezahlukeneyo zolondolozo, kodwa iindlela eziveziweyo zokuhamba ngokubanzi zinokuya kwiminyaka emihlanu ngaphandle kokuphinda zisebenzise itywina.
Kukho uhlobo olunye lomonakalo owahlukileyo kwizicelo ezihlanganisiweyo zekhonkrithi. Xa umlinganiso uphulukana nobophelelo kunye nekhonkrithi, loo nto iya kuhlanjwa, ikushiye ngamabala amdaka okanye ukudakumba.
Ayinyangwa, kunokwenzeka ukuba inyuse ubungakanani. Ngethamsanqa, ukubuyisela imbonakalo yoqobo yendlela yokuqhuba kulula.
Ukulungiswa kwamabala amdaka kwi-driveway edibeneyo yiprojekthi enkulu ye-DIY. Uya kusebenzisa i-epoxy, ke inyathelo lokuqala kukulungiselela indawo ecocekileyo neyomileyo, ikunika elona thuba lilungileyo lokuqina.
Qinisekisa ukuba nayiphi na into evulekileyo ikhutshiwe kwaye usebenzise isicoci se-pH esingathathi hlangothi. Hlanganisa uthuli lwekhonkrithi kunye ne-epoxy yento enye, kwaye usasaze ngaphezulu kwendawo ecocekileyo neyomileyo ye-bald.
Ngokufanelekileyo, uya kuba nomdibaniso oshiyekileyo kufakelo lwendlela yakho. Ukuba akunjalo, isifaki sakho sinokukunceda ukuba ufumane izinto ezingaphezulu eziza kuthi zihambelane nokubonakala komdibaniso ocacileyo.
Ufuna ukuba izinto zepatch zihambelane neyokuqala ngokubhekisele kuxinzelelo, umbala kunye nezinto eziphathekayo.
eyakhelwe kwimibono yedesika
Sasaza i-aggregate kwi-even layer uze ucinezele kwi-epoxy / concrete mix mix. Shayela uthuli lwekhonkrithi phezu kwesiqwengana ukugcwalisa naziphi na izikhewu, kwaye uvumele i-epoxy inyange.
Xa wonwabile ngesiphumo, tshayela naluphi na uthuli olukhululekileyo kwaye usebenzise umaleko wesitywina sekhonkrithi usebenzisa iroli yokupeyinta.
Abanini bamakhaya abathanda inkangeleko yendalo ngakumbi ngaphandle kwendawo yokuhlala banokuchukunyiswa kukudityaniswa kweendlela ezihlanganisiweyo.
Endaweni yeslabhu yekhonkrithi engaphefumlelwanga kunye neyamashishini engacacanga, ukubonakaliswa okubonisiweyo kunika ulungelelwaniso lokubonakala olungenamda.
Ukuba une-driveway enothambiso olubonakalayo okanye olunqabileyo lwamathambeka, okanye ukuba indlu yakho ibandakanya abantwana, abadala, okanye abanye abantu abanokushenxiswa kokuhamba, umgaqo ohlanganisiweyo wokuhamba unokuba yeyakho.
Umphezulu omdaka wekhonkrithi eveziweyo ubonelela ngendawo ezinzileyo kwaye yendalo engatyibiliki. Ngekhonkrithi yemveli, ngamanye amaxesha kuyongezwa; ukuvezwa kokuhlanganisiweyo kususa isidingo seli nyathelo longezelelweyo.
Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga iphepha lokuthelekisa le- ii-pavers vs ikhonkrithi yokuhamba ngeendlela .
uzithumela nini izimemo zomtshato ngaphandle kokugcina imihla
izimvo zokulala ezintle
Umama wengubo yebhulukhwe
i-brown backsplash ebomvu
ngowuphi umnwe onxiba iringi yesithembiso
umtshato unqwenela kumhlobo